UZibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu – The Ulwazi Programme
UZibokwakhe Johnstone Mnyandu, owaziwa ngelika Phuzekhemisi wazalwa ngo-30 Novemba 1962, waziwa kabanzi njengenkosi yohlobo lomculo womdabu, umaskandi. Ngezingoma ezikhuluma ngempilo yendoda, usizi lwayo, amaphupho ayo, umculo kamaskandi akumangazi ukuthi ubizwe ‘ngeZulu Blues‘. Uhlukaniswe ngesitayela esikhethiwe sesigingci nezinkondlo zesiZulu ezikhulunywa ngokushesha, umculo kamaskandi uhlukile eNingizimu Afrika. Kepha lokho akusho ukuthi ayaziswa umhlaba wonke. UPhuzekhemisi udlalele izethameli ezikude njengase-Denmark naseJapan!
Zibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, LL Awardee & Buhle Shezi, sign language interpreter
Zibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, LL Awardee
Phuzekhemisi, Photo courtesy of iol.co.za
Phakathi kwabaculi baKwaZulu-Natal ukuphawula ngezingxabano, igama lakhe elithi “Phuzekhemisi” lihumusha ngokuthi “phuza umuthi” – kanti kuthiwa kubhekiswa emaqinisweni angajabulisi kwesinye isikhathi atholakala emsebenzini wakhe. Ngokwalo mculi isiteketiso wanikwa ngabangani bakhe:
“Ngathola leli gama ngisebenza esitolo sefenisha eGoli. Babengafuni ukusigcinela amanzi abandayo, ngakho-ke ngavakashela usokhemisi oseduzane ukuthola amanzi okuphuza… ngakho abangani bami bangibiza ngoPhuzekhemisi”.
Ingoma ye-albhamu yakhe yokuqala, Imbizo, esebenzisana nomfowabo uKhethani, imfake enkingeni nabaholi bendabuko kanye nabaphathi be-SABC ngokuphenya izinduna ngokubiza njalo imihlangano lapho kulindeleke ukuthi abantu bendawo bakhokhe bengazelele khona. “Izintela”.
Kuwo wonke umsebenzi wakhe omude futhi obanzi ubonakala ethambekele ekuthukutheleleni elinye noma elinye iqembu ngezingoma zakhe. Wavinjelwa ubandlululo olwalulawula i-South African Broadcasting Corporation, futhi uhlukile ngokubeka impilo yakhe engcupheni ngabasekeli be-African National Congress ne-Inkatha Freedom Party ngenxa yemibono yakhe ekuqaleni kwama-1990.
Njengoba ekhuluma ulimi olujwayelekile, abalandeli bakhe abaningi bahlala bethembekile kuye. Umculo wakhe uhambelana nokuhlangenwe nakho kwabo empilweni futhi ubizwa kufanele ngokuthi “people’s voice“. Eziqoqa ngemuva kokulahlekelwa ngumfowabo ngo-1993, uPhuzekhemisi uye wakhipha ama-albhamu amaningi i-platinum futhi wenze uhambo oluningi phesheya kwezilwandle, edalula isitayela sikamaskandi kubabukeli bomhlaba wonke.Naphezu kokuthengisa ngempumelelo kwama-albhamu akhe, uPhuzekhemisi ukhetha ukuhlala impilo ethobekile emzini wakhe wendabuko emagqumeni agudle izungeze Umkomaas (Umkhomazi).
Umculi nombhali ovelele,inxusa lalesi sitayela esiyingqayizivele saseNingizimu Afrika somculo wesintu kanye nomhlaziyi wezenhlalo ohlakaniphile futhi onobuhlakani ongesabi ukukhomba izifo ezikhungethe umphakathi wakhe, uPhuzekhemisi uthathwa njengothembekile yilabo abamuzwayo ngoba akakaze alahle izimpande zakhe futhi usebe uqokelwe umklomelo weKora. Uphefome njengo khethekile emcimbini wokuvala indebe yomhlaba yeFifa 2002 eJapan / Korea. Ubuye waba nesandla ekuvuleni i-albhamu ye-Africa Express, Egoli.